USAID - Tobim-pahasalamana 35 misitraka herinaratra azo avy amin’ny masoandro
USAID – Tobim-pahasalamana 35 misitraka herinaratra azo avy amin’ny masoandro
Publié avril 1, 2021 par Book News
Namatsy vola ho an’ny orinasa sosialy Nanoé ny governemanta Amerikana ho fanomezana herinaratra azo avy amin’ny masoandro ny tobim-pahasalamana any Avaratra Atsinanan’I Madagasikara. Tobim-pahasalamana 35 no voakasik’izany. Natao ho fampandrosoana ny toe-karena sy ny fitsaboana eny an-toerana ity tetikasa ity.
Tetikasan’ny orinasa sosialy Nanoé
Entina hampivoarana ny asa ara-pahasalamana any Avaratra Atsinanan’i Madagasikara, hamatsy herinaratra azo avy amin’ny masoandro miisa 35 ny Sampan-draharaha Amerikanina misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena (USAID). Ilaina ny herinaratra eo amin’ny sehatry ny fitsaboana araka ny nambaran’i Nicolas Saincy, anisan’ny nanorina ny Nanoe, orinasa sosialy Frantsay-Malagasy.
Ny volana oktobra 2020, nahazo famatsiam-bola mitentina 240.000 Dolara tamin’ny governementa Amerikanina sy ny tetikasa Power Africa ity orinasa sosialy ity. Io tetikasa io dia natao ho fanatsarana ny fitsaboana olona mahatratra 140.000 isa any amin’ny tontolo ambanivohitra. Ankehitriny, folo amin’ireo tobim-pahasalamana 35 ireo no efa nahavita ny fotodrafitrasa, mbola andala-panatanterahina izany kosa ny 25 ambony.
Antoky ny fampandrosoana
Nanangana tambazotra madinika ny Nanoé manodidina ny tobim-pahasalamana.
“Rehefa tsy mahazo herinaratra ny vondron’olona ifotony any ambanivohitra dia misy fiatraikany ratsy eo amin’ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny vokatra ara-pahasalamana izany”,
hoy ny Tale jeneralin’ny USAID/power Africa, John Duplond.
6, 5 % ny olona any Avaratra Antsianana ihany no mampiasa herinaratra. Io anefa no antoky ny fampandrosoana ny asa ara-pahasalamana sy ny fiadiana amin’y aretina indrindra amin’izao valana’aretina covid-19 izao. Mbola sakana amin’ny fandrosoan’ny mponina aty Afrika ny tsy fisian’ny herinaratra. Miaina ao anatin’ny fahantrana ny olona ary 650 tapitrisa no mbola tsy mampiasa herinaratra. Tafiditra ao anatin’ny tetikasa Power Africa Off-Grid ny fanomezana famatsiam-bola ny Nanoé. Ny Power Africa off-Grid dia mamatsy herinaratra ho an’ny firenena sivy, ao anatin’ny tobim-pahasalamana miisa 300 manerana an’Afrika ambanin’I Sahara. Tafiditra ao anatin’izany i Madagasikara.
Maimaimpoana ny fahazoana ity herinaratra azo avy amin’ny masoandro ity ho an’ny tobim-pahasalamana, ny amboniny kosa dia amidy amin’ny olona eny an-toerana. Ankoatran’ny fampandrosoana ny toe-karena sy ny fanatsarana ny fitsaboana eny an-toerana, natao hanomezana asa ihany koa ity tetik’asa ity. Olona 13 izao no voaofana hiandraikitra sy hanodina ny varotra ary hampandroso ny eo amin’ny lafiny ara-teknika.